Ezinye izixhobo zokugoba izixhobo kunye nabavelisi
Xa ulwelo loxinzelelo olunamandla athile lungena kujikelezo, irotor iyajikeleza ijikeleze i-axator ye-stator eqhutywa ludaka loxinzelelo ukubonelela ngombane wento yokomba. ICandelo laMandla yintliziyo yemoto yokomba, emisela ukusebenza okuguqukayo.
I-centralizer ikakhulu yenziwe ngerabha kunye nokomeleza isinyithi irabha, esetyenziswa kwiinkqubo zokulinganisa ezahlukeneyo ngelixa kusombiwa. Sifunda kwaye sivavanya izinto ze-elastic kunye nemikhosi yokuqinisa phakathi kwesinyithi ukuyila i-rubber centralizer enobuchule enokukwazi ukuhlangabezana neemfuno zabathengi zokulinganisa izixhobo ngelixa kusombiwa.
I-TC bearing yamkela inkqubo yokuntywila ngokubanzi kwiziko eliqhelekileyo lobushushu obuphezulu, inkqubo yokuntywila ekhethekileyo
Ungqongqo ukulawula umgangatho izinto ekrwada ukuqinisekisa ukuba khabhayithi ngesamente kunye khabhayithi tungsten ukuhlangabezana nemigangatho yokusetyenziswa.
Inkampani yethu ivelisa imilomo eyahlukeneyo enezakhiwo ezahlukeneyo ukuhlangabezana neemfuno zabathengi basekhaya nabangaphandle bamabhanti amancinci.
Umhlangano wokuhambisa, oqhotyoshelwe esiphelweni sesiphelo seRotor, uhambisa ujikelezo kunye netorque eveliswe licandelo lamandla ekuthwaleni nasekuqhubeni ishafti. Ikwahlawulela nentshukumo ye-eccentric ye-rotor's nutation kwaye ibambe ukungathembeki kwayo.
Ujikelezo luhanjiswa nge-transmisson shaft, edityaniswe ngokudibeneyo kwindalo nganye kwisiphelo sokufumana intshukumo ye-Rotor. Omabini la malungu apakishwe ngegrisi kwaye atywinelwe ukongeza ubomi babo.
Idayimani yePolycrystalline (PDC), ekwabizwa ngokuba yidayimani eyenziwe ngumntu kunye nedayimani eyenziweyo) yenzelwe ukuhambisa ukusebenza ngokusika okuphezulu kunye nokwandisa ukusebenza komgangatho we-PDC.